Umncintiswano Giveaway Archives - www.HacksWork.com | www.HacksWork.com
Isigaba Archives: Umncintiswano Giveaway
Thola Mahhala Bitcoins Daily | BitCoinMiner
July 15, 2017 Umncintiswano Giveaway, Generator Hacks, Ezenye aphambe
Sawubona everybody. Namhlanje ukukunikeza into ekhethekile, mahhala futhi 100% indlela ephephile ukuze uthole bitcoins khulula nsuku zonke. Ithimba lethu ithuthukiswe le software inthanethi esasibiza ngokuthi BitcoinMiner. Hola bitcoin inesikhathi ukuthi ephelele, futhi ukhokhelwe ngokuzenzakalelayo kungakapheli amahora.
Ngenxa BitCoinMiner, akusekho elinde amasheke noma EFT ukuze kucace ngoba udinga kuphela ukufaka bitcoin wakho ikheli isikhwama. Ngakho, konke okudingayo ukuze uqale abahola kuyinto ikheli Bitcoin yokuthola izinkokhelo. Asazi ukuqoqa noma yiluphi ulwazi lakho lomuntu siqu, ngisho lakho le-imeyili. It engakutholi kulula kunalokhu. Thola bitcoins khulula nsuku zonke ukuqala manje !
Bitcoin kuyinto cryptocurrency kanye digital yokukhokhelana kusungulwe i uMklami engaziwa, noma iqembu program, ngaphansi kwegama Satoshi Nakamoto. It sakhishwa isofthiwe ovulekile-umthombo 2009.
Uhlelo lwe- peer-to-peer, nakuyi zenzeke phakathi kwabasebenzisi ngqo, umlomo nomlomo. Lezi ukuthenga eliqinisekisiwe yinethiwekhi ISIZINDA kanye kulotshwe ileja zomphakathi basakaza ngokuthi i blockchain. Njengoba uhlelo lusebenza ngaphandle Igumbi central noma umlawuli olulodwa, bitcoin ubizwa ngokuthi endlalekile lwemali lokuqala digital.
Ngaphandle idalwa njengoba kokhelo yezimayini, bitcoin kungenziwa umklomelo ezinye izinhlobo zemali,imikhiqizo, kanye nezinsizakalo izimakethe zomthetho noma emnyama.
Ake sibheke ukuthi lolu hlelo libukeka :
iPhone 6s Giveaway ( Umncintiswano Free)
March 13, 2016 Umncintiswano Giveaway
Sisebenza enikeza wonke umuntu Ithuba lesibili ukunqoba! Usukulungele?Ingabe usethe? Apple yakamuva iPhone 6s Giveaway futhi kodwa uma upheqa ngokusebenzisa internet ukwazi kanjani ukuthola mahhala iphone 6s, ke yithuba lakho ukunqoba mahhala iPhone 6s.
Kulesi iPhone 6s Giveaway umncintiswano 2 Abasebenzisi lucky uyosibonisa khulula iPhone 6s ngesonto -each. Kodwa ningakhathazeki uma ungeyena omunye 10c lucky, ngoba wonke ithikithi uqinisekisile iPhones khulula (iPhone 4s, iPhone 5s and iPhone 5c 16 GB Uhlobo) noma amacala iPhone khulula, kanye nezinye izesekeli.
Futhi into engcono kakhulu wena akudingeki akhokhe Dime ukuba uhlanganyele yethu iPhone 6s Giveaway 2016. Asazi cela yakho yiluphi ulwazi credit card, kungcono 100% free ukungena, futhi ephephile ngokuphelele. Ngakho iziphi usalindeni, isicelo free yakho iPhone 6s manje.
Hleze niyazibuza ukuthi : Ingabe lokhu inkohliso ? Kungani sinikeza lesi smartphone for free ?
Sinazo impendulo : sinikeza ingqikithi 20 iPhone 6s for free njengophawu ukubonga bonke abasebenzisi abaye wenza indawo yethu ukuba omunye website succesfull kakhulu emhlabeni .Akumelwe ngiyabonga zonke abafundi !
Yini okudingeka ukunqoba iPhone 6s Giveaway:
1.Chofoza VOTE ukunqoba inkinobho.
2.Omunye Complete enikezwa yabonakala (sifuna ukuqinisekisa ukuba ubone uma ungumuntu womuntu noma bot)
3.Ngemuva ukuqinisekiswa sipho wena ngokuzenzakalelayo wabhalisa emncintiswaneni
2.Download and ephelele babhalisa UKUBHALISWA FORM.txt ( Just Igama,City and Zip Code- akekho omunye idatha yomuntu siqu)
3. Manje thumela Ifomu nge-imeyili ku [email protected]
4.Wena manje emncintiswaneni iPhone 6s !
Kuwo wonke ngempelasonto sizobe ukumemezela abawine ekupheleni kwalesi post. Futhi sizobe uxhumane Abanqobi uma sinawo ikheli le-imeyli kubo .( ngokusebenzisa ifomu lokubhalisa)
Siyakuhalalisela Amaury M.! Sizobe e touch nge-imeyili ukuze uthole ulwazi lwakho umklomelo! Noma uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi !
Siyakuhalalisela Christian M.! Sizobe e touch nge-imeyili ukuze uthole ulwazi lwakho umklomelo! Noma uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi !
Donald V. ( Dallas, USA- 36) winner 13.03.2016 uyaziqhenya smartphone lakhe elisha futhi lisibonisa isithombe :
iPhone 6s Giveaway – 1 st umncintiswano 22.08.2015-17.12.2015 (20 iPhone 6 ).
– 2 st umncintiswano 27.09.2016-24.12.2016 ( 20 iPhone 6s)
Balamukele emva kwezinyanga ezimbili kuphela umsebenzi.
Hand of Fate 2 Unyaweni (PC,PS4 & XONE)
NBA 2K18 Amathiphu & Tricks (imininingwane release)
Top 10 imidlalo kungenzeka ezingaphendulwanga 2017
Isexwayiso: ipharamitha Okokuqala kufanele noma ibe yinto noma igama ekilasini ekhona e /ikhaya / mfhmodrs / public_html / WP-okuqukethwe / ama-plugin / yeloni-free-phumela-okuzivelelayo / wordpress / yetience-class.php elayinini 143